Maxkamad ku taala dalka Malawi oo xukuntay shaqsi Soomaali-British ah
Maxamed Xamid Abuubakar ayaa ka badbaadey xukun xabsi sideed sano ah.
LILONGWE, Malawi – Maxkamad ku taala caasimada Malawi ee Lilongwe ayaa ruux Soomaali British ah waxay ku xukuntay in uu bixiyo hal milyan oo ah lacagta waddankaas laga adeegsado ee loo yaqaano Malawian kwacha.
Sapulian Chitonde, oo ah afhayeenka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kamuzu, ayaa sheegay in lacagta uu bixinayo Maxamed Xamid Abuubakar ay tahay mid uu kaga badbaadayo xukun xabsi oo horey loogu ridday.
Abuubabar ayaa bishaan laga qabtay madaarka isagoo watay maandooriye waxaana xeer-beegtadda ay go’aamisay in uu xabsi ku qaato sideed sano oo ay wehliso shaqo adag ama in uu bixiyo ganaax lacageed oo badan.
Marry Photola, oo ah dacwadoogaha dowladda Malawi, ayaa shaaca ka dhigay in 31-sano jirkaan la qabtay 7-dii bishaan November isla markaana maandooriyaha laga helay boorsadiisa uu culeyskeedu gaarayo 5.6 kilo-garaam.
Sidda uu wariyey bogga Nyasatimes.com, Abuubabar oo kalkii uu kasoo muuqdey qirtay dambiga lagu soo oogay ayaa kusii jeeday caasimadda Belgium-ka ee Brussels, wuxuuna la socday diyaaradda Ethiopian Airlines.
Thomson Midias, oo ah garsooraha xukunka ku ridday Abuubakar ayaa si lamid ah wuxuu amar ku bixiyey in la burburiyo maandooriyaha la qabtay.
Iyaddoo si guud caalamka ay mamnuuc uga tahay dhoofinta maandooriyaha, haddana dalka Malawi ayaan laga ogoleyn ka ganacsiga mukhaadaraadka, waxaana qofkii lagu helo uu ku muteysan karaa xukun xabsi iyo shaqo adag.
Fal-dambiyeed dhacay bishii August ayaa lasoo wariyey in uu ku lug-yeeshay Yuusuf Cali.
Ingiriiska oo lacag ku goobaya Soomaali ku eedeysan dilka 47-jir
Soomaliya 02.01.2020. 12:12
Soomaliya 30.11.2020. 11:15
Digniin loo diray dadka gabaad-siinaya Soomaali aad loogu raadjoogo
Soomaliya 07.09.2020. 06:35
UK oo taageertay qorshe ay Kenya si feejigan uga fulineyso Soomaaliya
Afrika 10.10.2020. 18:15
Diblumaasi kasoo shaqeeyay Soomaaliya oo xil loo magacaabay
Caalamka 11.07.2020. 07:55
Gabar Soomaali ah oo London ugu geeriyootay fayruska Corona
Caalamka 23.04.2020. 10:30
Khayre oo kula kulmay Muqdisho mas'uul sare oo ka tirsan dowlada UK
Soomaliya 09.06.2019. 14:04